'जो पार्टी अध्यक्ष, उही प्रधानमन्त्री’- भिडियो - कान्तिपुर समाचार
काठमाडौँ — नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टी एकीकरणका बेला आलोपालो प्रधानमन्त्री चलाउने सहमतिको प्रसंग उप्काउँदै अबको १५ महिनापछि आफू प्रधानमन्त्री हुने अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेसँगै सिंगो पार्टीवृत्त तरंगित भइरहेको सन्दर्भमा उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री तथा पार्टी सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलसँग कान्तिपुरका श्रीश भण्डारी र दुर्गा खनालले गरेको कुराकानी :
यो प्रश्नसँगै मैले एउटा प्रसंग झल्यास्स सम्झिएँ । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालजी केही समयअघि भारत जानुभएको थियो । भारतका केही सञ्चार माध्यममा उहाँलाई उद्धृत गरेर समाचार पनि आए । संयोगले एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्ता मैले पनि सुनेको/हेरेको थिएँ । त्यसमा प्रश्नकर्ता सञ्चारकर्मीले ‘तपाईंको त सहमति यस्तो यस्तो भएको छ रे’ भन्ने हिसाबले जिज्ञासा राखिन् । उहाँ (दाहाल) ले यस्तो सहमति छ भन्ने आशयले नै उत्तर दिनुभएको थियो ।
एकताबद्ध भएपछि पार्टी अव्यवस्थित भएको हो ?
वामदेव गौतमले पनि अध्यक्ष दाहालको कुरामा समर्थन गर्दै एक व्यक्ति एक पद हुनुपर्छ भन्नुभएको छ । पार्टीभित्र यही विषयलाई लिएर गुटबन्दी हुनेजस्तो देखियो होइन ?
दाहालले प्रधानमन्त्री बन्ने/नबन्ने कुरा यो सरकारले कसरी काम गर्छ, त्यसमा भरपर्छ भन्नुभएको छ । सरकारको कामप्रति उहाँको असन्तुष्टि जस्तो देखिन्छ नि ?
अर्को कुरा, यो सरकारमात्र होइन, प्रणालीमा भएको परिवर्तन हो । संवैधानिक घोषणा त गर्‍यौं । तर त्यो घोषणामा भएका वास्तविक उन्नत कुराहरू भुइँमा खुट्टा टेकेर हिँड्न पाएका छैनन् । कानुनी संरचना बनिसकेका छैनन् । बल्लबल्ल नभई नहुने कानुनहरू गत संसद अधिवेशनमा बनायौ । बाँकी अब बनाउछौ । संधिवानले तीन वटै तहका सरकारका काम किटान गरेको छ । त्यो किटानअनुसार कानुन बनेका छैनन् । २०७२ पछि पनि कस्ता राजनीतिक गलफती गर्‍यौं ? थाहै छ । तीन वर्षभित्र सबै कानुन बनाइसक्ने भने पनि हामीलाई कति समय लाग्यो ? यही बीचमा हामीबीच फेरि अस्थिरता सिर्जना गर्ने ढंगको कुरा राम्रो भएन ।
पार्टी एकताको एक वर्ष पुग्दा पनि कतिपय कामअझै बाँकी छन् । अहिले भइरहेका गतिविधिलेएकतालाई भत्काउँदैन ?
कम्युनिस्ट पार्टी फुट्न मात्र होइन, जुट्न पनि सक्छौं भनेर एकता गरेको हो । कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ता र सकारात्मक धारणा राख्ने जनताको चाहनाकोपरिणाममा एकता भएको हो । राष्ट्रिय आवश्यकताको परिणाम पनि हो । राजनीतिक अस्थिरताले हामी
आक्रान्त थियौं । एकताबद्ध त भयौं, तर यो एकताबद्धपार्टी सुसंगत विचारको शृंखला बोकेको पार्टी हुनुपर्छ ।
महाधिवेशनका प्रक्रिया हुन्छन् । महाधिवेशन भनेको भीड जम्मा गर्ने होइन । सदस्यता व्यवस्थापन हुनुपर्छ, कमिटी व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसअनुसार आउने पार्टीको संगठन कस्तो हुन्छ ? वैधानिक व्यवस्था के हुन्छ ?त्यसमा सहभागी हुनुपर्‍यो । यी काम सकेर मात्र महाधिवेशन हुने हो ।
तपाईँले सैद्धान्तिक रूपमा तत्कालीन एमालेले लिएको 'जनताका बहुदलीय जनवाद (जबज)’ लाई नै पार्टीको विचार बनाउनुपर्छ भनेर लागिरहनुभएको छ तर यो विचार पुरानो भयो भनेर पार्टी एकताकै क्रममा 'जनताको जनवाद’ अँगाल्ने भनिएको होइन ? तपाईंचाहिँ किन पुरानै कुरामा अडिनुभएको हो ?
एकताका बेलामा जारी भएको वक्तव्यको कुरामा पनि त्यसबेला कसको विचार लिइयो ? को जित्यो ? को हार्‍यो भनेर मानोवैज्ञानिक असर नपरोस् भनेर एमालेले अवलम्बन गरेको जबज र माओवादीले अवलम्बन गरेको ‘एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद’ र माओवादका सकारात्मक कुरालाई अध्ययन गर्दै भोलि उपयुक्त समयमा टुंगो गर्ने भन्ने छ । आज कसैले नयाँ विचार बनाउँ भनेर मडारिएर हुँदैन । हामीले जडताको विरुद्ध लडेर त्यो विचार ल्याएको हो ।
अनि 'एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद र माओवाद’ भन्नेहरूको स्पेसचाहिँ के हुन्छ त पार्टीमा ?
यो प्रश्न ठीक ढंगले आएन । सांसदले खर्च गर्न पाउने भन्ने होइन । यो निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम हो । त्यहाँ सांसदले कुनै तोक लाउने खर्च गर्ने होइन । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले जिल्ला समन्वय समितिको समन्वयमा योजना छनोट हुने हो । सबै निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रीय योजना पुग्दैनन् । त्यस्तै ठाउँमा अत्यावश्यक काम समन्वय गरेर गराउनका लागि त्यो रकम छुट्याइएको हो ।
सरकारले लोकतान्त्रिक अधिकार खुम्च्याउन खोजेजस्तो देखिन्छ । मिडिया काउन्सिल, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी विधेयकहरू यस्तै उद्देश्यले आएका हुन् कि जस्तो छ । सरकार कानुन बनाउने कुरामा किन यस्तो अनुदार ढंगले प्रस्तुत भइरहेको छ ?
तर कतिपय टिप्पणी गर्ने साथीहरूले प्रस्तावित कानुनको ठ्याक्कै जे प्रावधान हो त्यो पढ्नु भएकै छैन । यसमा आरोप मैले लगाएको होइन, सम्मानपूर्वक टिप्पणी गरेको हो । एउटा विधिपूर्वक ल्याएका चीजहरू विधिपूर्वक नै टुंगिन्छन् । एउटा आग्रह राखेर मिडिया विधेयकका बारेमा टिप्पणी भएका छन् । त्यहाँ के चीजचाहिँ भएन ? त्यो भन्नुपर्‍यो । नभएको कुरा त सच्याउन सकिन्छ । मिडियालाई सम्मान गर्छु । पोजेटिभ कुरा पनि छन् । तर कतिपय आत्मघाती चीज पनि आएका छन् ।
मिडियाकै कारण मान्छेलाई आत्महत्याको तहसम्म पुर्‍याएको छ । मिडियाले चाहिँ कुनै जिम्मेवारी लिनुपर्दैन ? जवाफदेही हुनुपर्दैन ? दुनियाँमा लोकतान्त्रिक भनिएका मुलुकहरू अमेरिका, बेलायत, भारत, जापानमा मिडिया जिम्मेवार बनाउने कुरा छैन र ? नियमन गर्न खोजेको भन्दा पनि मिडिया जिम्मेवारीपूर्वक चल्नुपर्छ भनेको हो । मिडियाकै कारण पीडित भएको म नै एउटा भुक्तभोगी हुँ । राजाको शासनकालमा म मन्त्री हुँदै हिरासतमा पुगेको थिएँ ।
एकजना पत्रकार निमकान्त पाण्डेले त्यही बेला मेरोबारेमा ‘ट्यांकीमा तीन करोड रुपैयाँ भेटियो’ भनेर लेखे । रेडियो, एफएम बन्द छन्, अखबार सेन्सर छन् । हामी हिरासतमा छौं । हाम्रोविरुद्धमा त्यसरी लेखिन्छ, कुनै जवाफदेही हुनुपर्दैन ? अनि मेरो सार्वजनिक सम्पत्ति क्षतविक्षत हुँदा चिरहरण हुँदा कुनै जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन ? जनताको प्रतिनिधिबारेमा हूलहुज्जत हुन्छ । केपी ओलीका बारेमा कस्ता कुरा सामाजिक सञ्जालमा आएका छन् ? कुनै आपराधिक कुरामा दण्डित हुनुपर्छ कि पर्दैन ? मैले केही गलत गरें भने जे–जे मन लाग्छ, धुल्याएर लेख्नुहोस् । जसरी मैले गलत गर्दा म दण्डित हुन्छु, त्यसरी गलत गर्ने अरू पनि दण्डित हुनुपर्छ । तपाईंहरूचाहिँ दण्डित हुनु नपर्ने ? मिडियाहरूलाई स्वतन्त्रताको पक्षमा हामी लडेर आएका हौं । लड्छौं । तर मिडिया पनि जवाफदेही त हुनुपर्‍यो नि ?
मिडिया काउन्सिल अध्यक्षलाई सरकारले हटाउन सक्ने र पत्रकारलाई जरिवाना गर्ने जस्ता प्रावधान दुरुपयोग होला भन्ने चिन्ता छ । यसलाई राजनीतिक रूपमा कुनै मिडिया मन नपरेको अवस्थामा कारबाही गर्ने अस्त्र बनाइने हो कि ?
यो तपाईंहरूको मनोगत निष्कर्ष हो । त्यत्तिकै कोही आउनेबित्तिकै मिडियाको घाँटी समाउन आउँछ र ? सरकार आवधिक हुन्छ, भोलि कांग्रेसको सरकार आयो र म कम्युनिस्ट पार्टीनिकट सञ्चारकर्मी भएर गलत लेखें भने दण्डित त हुनुपर्‍यो नि ।
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम कर्तव्य सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको अधिकारलाई शक्तिशाली बनाएर विधेयक ल्याइएको छ । त्यसको पनि विरोध भइरहेको छ नि ?
राष्ट्रिय सुरक्षाको कुरा हामीले एक अक्षर पनि थपेको होइन । विगतको सरकारको पालामा रक्षामन्त्रीले प्रस्ताव गरेर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर विधेयकसंसद्मा पुगेको हो । त्यही चीज जस्ताको त्यस्तै ल्याएको हो । परिषद्मा प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री मुख्य सचिव र प्रधानसेनापति हुन्छन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले औपचारिक सिफारिस नगरी राष्ट्रपतिबाट सेना परिचालनको घोषणा हुँदैन । प्रधानसेनापतिलाई क्रस गरेर प्रधानमन्त्रीले भन्नेबित्तिकै त सेना परिचालित हुने होइन । अनि यो बिनाबातको कुरालाई बात बनाउने कुरा ठीक छैन । कथंकदाचित औपचारिक रूपमापरिषद्को बैठक नबस्दा प्रधानमन्त्रीले प्रस्तावसम्म मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने भन्ने मात्र हो । सेनापतिलाई अलग गरेर सेना परिचालन हुँदैन ।
गत शुक्रबार अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयले 'इन्डो प्यासिफिक’ रणनीति सार्वजनिक गर्दै नेपाललाई पनि त्यसको साझेदार बनाउने उल्लेख गरेको छ । के नेपाल अमेरिकाको यो रणनीतिमा सामेल भएको हो ?
कुनै पनि रिजनल वा ग्लोबल ‘मिलिटरी एलायन्स’ मा नेपाल सामेल हुँदैन । यो स्पष्ट कुरा हो । हामी दुईपक्षीय रूपमा तालिम गर्छौं । चीन, भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश अमेरिका, बेलायतसँग यस्तो तालिम चलेका छन् । कहिलेकाहीं संयुक्त तालिम पनि हुन्छन् । त्यसमा सहभागी हुन्छौं । तर कुनै एलायन्समा भने सामेल हुँदैनौं।
प्रकाशित : जेष्ठ २१, २०७६ १७:१३
सरकारले पत्रकारको टाउकोमा तरबार झुन्ड्याइदियो : शर्मा
जेष्ठ २१, २०७६ वीरेन्द्र केसी
अर्घाखाँची — कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सरकारले पत्रकारको शिरमा तरबार झुण्डाइदिएर लेख्ने कलम बन्द गरिदिन खाजेको आरोप लगाएका छन् । गणतन्त्र ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका पत्रकारलाई विद्येयक ल्याएर स्वतन्तापूर्वक समाचार लेख्नलाई बन्देज गरी तानाशाह लाद्न खोजेको दाबी गरे ।
प्रेस युनियनले सन्धिखर्कमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा शर्माले कलमलाई नियन्त्रण गर्नु लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि प्रहार गर्नु भएको बताए । स्वतन्त्र प्रेसलाई अंकुश लगाउने काम कांग्रेससलाई सैह्य नभएको उनले बताए । 'सरकारले राम्रो काम गरोस् हामी कमजोर प्रतिपक्ष रहेर सघाउँछौं,' उनले भने, 'समृद्धिको सपना देखाएर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुरगामी परिणाम देखाउन सक्नु भएन । बजेट पनि कामचलाउ नै भयो ।' ओलीले वायुपंखाका कुरा गर्ने तर, कामको शैली वयलगाडा जस्तै भएको उनको तर्क छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम नाम मात्रैको भएको छ । 'विगतको बजेटबाट कोही पनि युवा रोजगारी भएनन्,' उनले भने । दुई तिहाइको सरकारको नेतृत्व गरेका बीपी कोइरालाले त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीको २५ सय तलबलाई घटाएर २ हजार बनाएको उदाहरण दिँदै अहिलेको ओली सरकारले एक रुपैयाँ भए पनि तलब घटाएरर उदारता देखाउनु पर्थ्यो, ठीक उल्टो राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको तलब बढाउनु बेठीक भएको शर्माको तर्क छ ।
सरकारले बालुवाटारको जग्गाको विषयलाई अन्यत्र मोडेको बताए । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नाम जोडेर जग्गा हडप्ने आफना नेतालाई संरक्षण गर्न लागि परेको उनको भनाइ छ ।
गणतन्त्र ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका नेत्रविक्रम चन्द समूहलाई आतंककारीको जस्तो व्यवहार गर्नु सरकारले गलत गरेको उनले बताए । चन्दलाई वार्तामा बोलाएर मुलुक परिवर्तन गर्ने मूलधारमा ल्याउन उनले सरकारलाई आग्रह गरे ।
प्रकाशित : जेष्ठ २१, २०७६ १७:१०